Akuko SoDA nke 2013: Nlere ahia ahia nke Digital | Martech Zone
Akuko 2013 SoDA: Digital Marketing Outlook
The Societytù Na-ahụ Maka Ndị Na-ere Ihe Ahịa Digital wepụtara akụkọ ha nke 2013 na mbido afọ a. E nwere ụfọdụ nchoputa isi n'ime akụkọ ahụ na atụmatụ abụọ ịzụ ahịa dijitalụ yana mgbanwe na otu ụlọ ọrụ si eji ụlọ ọrụ ahịa dijitalụ.
Ihe karịrị ọkara nke ndị niile zara ajụjụ kwuru na ha bụ na-abawanye usoro mmefu ego dijitalụ ha, na otutu ngbanwe site na ngbanye ego nke ego di n'ime dijital. Naanị 16% na-amụba ahịa ha na-emefu.
Ndị ọrụ ụlọ ọrụ zuru ezu na-erite uru dị ka ụlọ ọrụ na-ala azụ ịgbasawanye isi okwu, ọkachasị dịka ụlọ ọrụ na-akawanye oke ike ha inyocha data ma kwado ndị okenye, ndị ahịa ahịa dị n'ime nzukọ ahụ.
Agile Ahịa na-agbanwe ngwa ngwa dị ka usoro ọhụrụ maka ndị na-ere ahịa iji mee ihe iji nwekwuo nzaghachi maka mgbanwe ahịa ahịa. Gbalia guo onye ahia anyi na ezi enyi m, Usoro Jascha Kaykas-Wolff na Agile Marketing.
-Re ahịa data, atụmatụ ọdịnaya na mwekota ga-aga n'ihu na-eme ka nsonaazụ ahịa na-eme ka ndị otu na-enwetakwa ego dị ka ahụmịhe ahịa hazie gafee ọwa ma mee ka aha gi ma obu onye ahia gi.
Gụchaa ya 2013 Digital ahịa Outlook
Na-eduzi Econsultancy, SoDA si 2013 Digital Outlook Marketing Survey nwere ndị nzaghachi 814, ihe dịka 25% sitere na ọmụmụ 2012 nke SoDA. Ndị ahịa na-anọchite anya otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị niile zaghachiri nwere oke nkewa n'etiti ụlọ ọrụ ndị na-ebu ngwaahịa (33%), ọrụ (31%) na ngwakọta nke ngwaahịa na ọrụ (36%). Ihe karịrị 84% nke ndị zaghachiri bụ ndị isi mkpebi na ndị na - eme ihe ike (CMOs, ndị isi ọrụ, ndị isi na ndị isi) na mmefu ego kwa afọ site na US $ 5M ruo ihe karịrị US $ 100M na ndị ahịa ha bụ North America (50%), Europe (22 %) na APAC (12%). N'afọ a, ọtụtụ ngalaba na-eto eto nke ndị na-aza ajụjụ, na 12% na-egosi na ọ dịghị otu kọntinent na-aza ọtụtụ n'ime ego ha nwetara.
Tags: Mmiri soda 20132013 soda akụkọele ahịa dijitalụakụkọọha nke ụlọ ọrụ dijitalụSoDaakụkọ soda
Ihe ịga nke ọma n'ịntanetị na CXM
Achọpụtara Ihe 5 Dị Mkpa nke SEO na Frog Frog